Waa maxay Jadwalka? Waa maxay sababta Miisaanku yahay Software Software Best
Sababta Suuqa Socda ee Suuqa
Si fudud loo Isticmaali karo
Jadwalku Ma Lahaa Xog kasta
Toogashada, Muuqaal Isdhexgalka ah
Isbarbardhig ka mid ah Kuleejooyinka Isku-dhafan
Tableau waa Hogaamiye Waadi
2 Koorsooyinka Tababarka Muhiimka ah iyo Shahaadooyinka oo ka caawiya Muujinta Macluumaadka
Mawduuca Mabda 'Desktop Basicamentals' Target Audience
2. Tableau Desktop Tababarka Tababarka Sare & Shahaadada
Tableau Desktop Maqnaanshaha Tarjumaada Habboon
Preqisite loogu talagalay Tababare Mass Desktop
Jadwalku waa feejignaan xogta la taaban karo oo ay sameeyeen Software Software. Jadwalku wuxuu si aan kala go 'lahayn ula shaqeyneynaa ilaha xogta oo dhan, waa Wareegga Macluumaadka shirkadda, Microsoft Excel ama xogta elektarooniga ah. Jadwalku wuxuu xisaabta ku darsaday fahamka xilliga gaaban isagoo beddelaya xogaha si gundhig u ah jaangooyo, fikrado macquul ah oo la yiraahdo dashboards. Hannaankani wuxuu qaadanayaa daqiiqo ama daqiiqo sida caadiga ah bilaha ama sanadaha, waxaana lagu dhammeeyaa iyada oo la adeegsanayo fudud si aad u isticmaasho interface intuitive. Sababta Mawduuca
Shaxda waxaa loogu talagalay in lagu xakameeyo loona baaro xogta si isku mid ah, si sahlan loo qaado. Natiijadani waxay ku jirtaa wakhti ka sii fiicnaada wanaajinta, taasoo sahlaysa xogtaada xawaaraha leh. Awoodda lagu xallin karo suuqa waa si deg deg ah. Jadwalku wuxuu awood kuu siinayaa inaad degto doorashooyin ganacsi oo dhakhso leh oo ku saleysan xogtaada, taas oo ku siinaysa booskaas wanaagsan.
Imtixaanka xogta uma baahna inuu noqdo mid adag, laakiin halkii marxaladaha kala duwan ee xogta waxay ka dhigeysaa sidaas. Jadwalku wuxuu kala saaraa dhibaatooyin aan micno lahayn, isagoo xoogga saaraya waxa ugu muhiimsan - helitaanka qaddarinta xogtaada. Jadwalka tooska ah ee fududeynaya ee miisaanka ayaa ah wax kasta oo adag oo wax lagu barto, taas oo macnaheedu yahay inaadan noqonin xog xogogaal ah oo ku shaqeynaya.
Fadlan loogu talagalay kartida baaritaanka weyn ee xogta, Tableau ayaa ka dhigeysa in la fuliyo tallaabooyinka aan loo baahnayn ee xogta u sahlan. Jadwalku wuu kala saari karaa oo wuxuu u maleynayaa in xogtaadu ka sarreyso software kasta oo ka muuqda xogta, iyada oo aan loo eegin sida xogtaadu u ballaaran tahay.
Dhammaan macluumaadka waxaa loo dhigaa mid u dhigma Tableau. Isticmaalka fudud ee udubdhexaadinta waxaa lagu qanciyaa mashiinka xogta aadka u sarraysa oo ah habraaca nidaamyada ilo kala duwan oo leh dareen aan caadi ahayn. Uma baahnid inaad sii werwer ku yeelatid macluumaadka fikradaha xogta si loo isticmaalo marka la eego macluumaadkaaga, maaddaama Miisaanku uu dhamaantiis sameeyo.
Waxaa laga yaabaa in mawaadiicda ugu wanaagsan ee aan la isku haleyn karin Jadwalku wuxuu ka badan yahay tartamayaashu waa awooda ay ku abuuri karto matalo cajiib ah. Gudbaaba, Tableau waxay bixisaa sifooyinka ugu muhiimsan ee macluumaadka faa'idoyin ka faa'iideysiga wax-qabadka macluumaadka wax-qabadka.
Jadwalku wuxuu wax ka beddelay warshadaha ganacsiga iyada oo la fahamsan yahay inuu si dhakhso ah u furan yahay qof kasta - haddii ay tahay iyada oo loo marayo qalab telefan, barnaamijka webka, iPad ama telefoonka gacanta.
Tableau waxay ku guulaysatay sharaf tiro aan la tirin oo dhan iyada oo loo marayo warshadaha aqoonta ganacsiga waxayna si deg-deg ah u noqotaa heerka istaandarada xogta tayada.
Tableau ayaa xittaa ku guuleysatay aqoonyahanada warshadaha warshadaha ee Gartner iyada oo marxaladda BI ay go'aamisay.
Tableau Tababarka aasaasiga ah
1. Tababarka Miisaanka Shaqada ee Tababarka Koorsada Tababarka & Shahaadada
Baro awoodda mashiinka Mashiinka hore ee fasalka. Waxaad ka qaadi doontaa taxadar taxaddar leh oo ku saabsan baaritaanka xogta iyo qorshaha muuqaalka ee Jadwalka, iyo inaad ogaatid sida loo soo bandhigo aragtida iyo kumbiyuutarrada caqliga ah.
Koorsadani waxaa loogu talagalay bartaha bartamaha macaamiisha macaamiisha. Waa shakhsi kasta oo la shaqeeya xogta - bixinta wax yar oo aan loo baahneyn oo ah aasaaska khaaska ah ama aasaasiga ah. Koorsadan waxaa loogu talagalay inay kaa caawiso fahamka iyo isticmaalka fikradaha muhiimka ah iyo habraacyada Soodejka si aad uga guurto matalaad adag oo adag oo lagu ogaado sida loo xoojiyo boodhadhka caqliga leh.
Marka la gaaro dhammaadka koorsadan, waxaad yeelan doontaa awoodda aad:
Isku duub macluumaadkaaga.
Beddel oo kaydiya ilaha xogta.
Faahfaahin ereyada 'Tableau'.
Ka faa'iideysiga interface interface / aragtida dunida si aad si macquul ah u samayso dareemo wax ku ool ah.
Samee sawirro muhiim ah oo ay ku jiraan qiyaasaha tirakoobka xisaabta ee aasaasiga ah, ururinta caadooyinka iyo qiyamka, taariikhda xisaabta, iyo xisaabinta miiska tartanka.
Kala hadal xogtaada adigoo isticmaalaya noocyada matalaadda ee la socda:
Iska ilaali tabs
Noocyada khudradda iyo garaafyada baraha
Hubka laba-laabka ah iyo garaafyada isku-dhafan ee leh noocyo kala duwan oo jeeg ah
Miisaanka ugu muhiimsan
Meelo Qaadasho ah
Qalabka wax soo saarka si aad ula wadaagto fikradaha.
Baadhista mawduucyada miisaaniyadeed oo dheeri ah ee Tableau Desktop oo ka sii dara xogtaada. Waxaad baran doontaa qalabka loo adeegsado hababka sawir-gacmeedka iyo qaababka garaafka kuwaas oo samaynaya imtixaan u-qalma iyo dashbo.
Ma jeclaan laheyd inaad noqoto macaamiil macquul ah oo sameynta macaamiil muraayad ah? Koorsadan, waxaad fahmi doontaa sida loo helo miisaanka ugu muhiimsan ee Table Desktop iyadoo lagu dhejinayo sawirro iyo iyaga oo u adeegsanaya xaalado dhab ah. Tani waxay kaa caawineysaa inaad fahamto marka miis fadhiya, lagu ogaado ama LOD ay tahay in la isticmaalo iyo marka ay daboolaan. Waxaad sii wanaajin doontaa fahamka sida aad si dardar leh u diyaargaroobi lahayd una diyaarinayso matalaaddaada. Tan waxaa lagu sameyn doonaa xaalado gaar ah oo ku saabsan waqtiga jajabka, juqraafi, iyo dib u eegista xogta. Kahor dhammaadka koorsadan waxaad yeelan doontaa hufnaan aad u sarreeysa oo ah jarista istaraatiijiyada dhismaha iyo xisaabinta sameynta baaritaanka khayaaliga iyo dashbo-dhiska.
Tani waa fasal heer sare ah. Understudies waa inay leeyihiin faham xoogan oo ah xisaabinta miiska ee Tableau ka hor intaadan fasalka u socon. Waxaa si aad ah loogu qoraa in fahamku uu ku guuleystey Desktop I iyo Desktop II ama fikradaha iyo awoodda siman ee ka hor inta aanad miisaanka III ku dhaqaaqin.
Ku calaamadee muqaalka sawirada si aad u kordhiso aqoonta dheeraadka ah ee xogtaada
Qalabka digniinta dabka lagu soo rogay waxay ku soo rogeen baaritaankaaga
Isticmaal hababka khafiifinta
Isticmaal sawirro, xuduudaha, iyo qiyaasaha miisaanka labadaba
Isticmaal hababka miiska si aad wax uga qabato ganacsiga caadiga ah kiisaska
U diyaari fikradahaaga iyo dashbo-galayaasha waxtarka ugu badan
Baar baaritaanka sawirada ganacsiga dhabta ah
Maamulaha shirkadda Apple Tim Cook ayaa soo saaray $ 198 million oo 2016 ah, Ma Run?